रानीपानीमा छैन खानेपानी
पर्वत : यहाँको एक गाविसका गाउँलेले वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् । रानीपानी गाविसको १ देखि ९ वडामा खानेपानी नभएपछि र्सवसाधारण समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन् ।
'खानेपानी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक'
काठमाडौं : उपत्यकामा देखिएको पानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको योजनाले कुनै गति लिन नसकेको भन्दै उपत्यकाबासीले दीर्घकालीन समाधानको उपाय सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
आकासेपानी संकलन सुरु
दाङ : काभ्रे गाविसको कमिरे चौरमा आकासेपानी संकलन सुरु गरिएको छ । पानीसंकट समाधान गर्न खानेपानी डिभिजन कार्यालयले आकासेपानी संकलन सुरु गरेको हो । कार्यालयले काभ्रे गाविसको कमिरे चौरमा ३६ लाख ८८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँको लागतमा आकासेपानी संकलन गर्न टंकी निर्माण गरेको छ । २० प्रतिशत भने जनश्रमदान रहने छ । कमिरे चौरका ७० घरपरिवारका लागि २ लाख लिटर, ५० हजार लिटर र २० हजार लिटर पानी अटाउने टंकी निर्माण सुरु गरिएको डिभिजन खानेपानी कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर थापाले बताए ।
सार्वजनिक धारा निर्माण
र्सलाही : सर्वसाधारणलाई पिउने पानी समस्या भएपछि उत्तरी क्षेत्र नवलपुरका व्यवसायीले सार्वजनिक धाराको व्यवस्था गरेका छन् । सुक्खा मोसममा धमाधम कम गहिराईका हातेधारा सुक्न थालेपछि बढी गहिराइबाट पानी निकाल्न बजार क्षेत्रमा चारवटा हेन्डपम्प जडान गरेको व्यपार कल्याण समितिका अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
बिहे गर्नु छ ? शौचालय बनाउनुस
बाँके : तपाईको घरमा विहे गर्ने उमेरका जवान छोराछोरी छन् ? अनि घरमा शौचालय छ कि छैन ? ख्याल गर्नुस है, यदि घरमा शौचालय बनाउनुभएको छैन भने तपाईको जवान छोराछोरीको विहे नहुन पनि सक्छ ।
पानी महसुलवृद्धि विवादमा
दलहरु विभाजित, उपभोक्ताद्वारा संर्घष समिति गठन
इटहरी : साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्था इटहरीले केही समयअघि खानेपानी महसुलमा गरेको वृद्धिको विषयलाई लिएर दलहरु विभाजित भएका छन् । महसुलवृद्धि फिर्ता गराउने उद्देश्यले शनिवार संर्घष समिति गठन गरिएको छ ।
Results 19 - 24 of 4770